I-Home Gym Exercise Ibha Yokuzivocavoca Enezinjongo Eziningi ze-Gym Yasekhaya, Iphelele Nge-Pushups, Ibha ye-Pullups Chin-up, i-China Home Gym Exercise Ibha Yokuzivocavoca Enezinjongo Eziningi E-Gym Yasekhaya, Ephelele Nge-Pushups, I-Pullups Chin-up Bar Manufacturers, Suppliers, Factory - INANTONG IRONMASTER SPORTING INDUSTRIAL CO, LTD.
Home Gym Exercise Multi-purpose Workout Bar For Home Gym, Perfect For Pushups, Pullups Chin-up Bar183
Ibha ye-Chin-up ye-IRSB0909
Exhibits material: plastic/foam/steel pipe
3 in 1 multifunctional single parallel bars
Ukudonswa phezulu kufanele ube nakho ebangeni lamathuluzi wokuqina. Ukudonsa i-barbell kubhekwa njengenye yezindlela eziphumelela kakhulu ukukhomba emuva, amahlombe, isifuba, izingalo, ama-triceps, ama-biceps nemisipha ye-lat.
Ibha yokudonsa / yokuphakamisa inikeza indlela engabizi yokuzivocavoca imisipha yakho ekhaya. Ibha yokudonsa yenzelwe ukushelela kunoma yimuphi umnyango ojwayelekile futhi ingena ohlakeni oluqinile olunamafreyimu omnyango.
Ibha yokudonsa eqinile yenziwe ngensimbi esezingeni eliphakeme ukuze iqine, iphephe futhi isetshenziswe isikhathi eside.
Uhlaka lomnyango oluqinile lungabamba kufika ku-100 kg wesisindo futhi lulungele abasebenzisi abahlukahlukene. Lokhu kungenye yemigoqo yokudonsa ehamba phambili emakethe futhi noma ngubani angenza kalula ukuzivocavoca ekhaya.